Adume isilomo Sofi Loren (Sofia Shikolone) wazalwa ngo-1934. Umndeni inkanyezi esizayo ayenendlela kunalokho nesizotha, ngakho kusukela eminyakeni intombazane ekuseni ekuzameni ukushintsha izimpilo zabo zaba ngcono.
ukubukeka Ezivelele kanye sibalo ekhexisayo ubuhle abasha beziphawuleka emncintiswaneni ubuhle edolobheni elincane Potstsuolli, lapho echithe ebuntwaneni kuya enkathini yokuthomba. Phakathi neminyaka 14 sekuyindlela owawina emncintiswaneni. Ekhuthazwe impumelelo, Sofia uzama isandla sakhe emncintiswaneni "Miss Italy" ngo-1950 futhi waba umnikazi we "Miss Elegance" umklomelo. Kungenzeka ukuthi izwe bengeze wahlangana nowesifazane ongumdlali wamabhayisikobho enkulu uma akazange unake umkhiqizi Carlo Ponti.
Iqhaza lokuqala nama-movie Sofi Loren ukugcizelela kuphela idatha yangaphandle yayo. Ponty akaboni esingathí sina okukhulu actress imizwelo engokwemvelo, ubizwa bakhangwa ubuhle bakhe kanye spontaneity, futhi akumangalisi ukuthi ephula romance phakathi ontanga. Carlo buhlanjululwe unkosikazi, yena ushada ne UZandile. Khona-ke ngokuphelele nekubuketa indima umdlali waseshashalazini.
Umsebenzi wokuqala ezinkulu Sofi Loren e ifilimu "The Gold laseNaples", adalwe Vittorio De Sica, lapho umdlali omncane ngokwemvelo kakhulu ubunjalo umninisitolo elula, umxhwele umqondisi. Wabe Sofia isikhathi eside ukuba babe muse yakhe. Isibukeli bathandile amafilimu lokhu umqondisi ne Sofi Loren. Ikakhulukazi ngempumelelo Ngohlelo umlingisi nge Marcello Mastroianni. Futhi lokho amafilimu badlala ndawonye?
Ukudweba "Umshado isiNtaliyane," "Izolo, Namuhla Nangomuso" futhi ifilimu "Sunflower" nge Sofi Loren futhi Marcello Mastroianni khumbula ngesikhathi sokushisa kwemini izilaleli izinkanuko iyiqiniso futhi imizwa ukuthi abadlali ngobuciko komculo esikrinini. Zonke izithombe usitshele ngobuhlobo nzima ezithandwa, esikhundleni isimo ngokungagwegwesi kwamahlaya kuya ezibuhlungu. Kodwa ngaleso namaqhawe efanayo enithwala uthando lwami ngokusebenzisa isikhathi izimo. Kulezi izithombe alidingi isingeniso, njengoba kakade babe zabuna, futhi ngibabona Kuhlale kumnandi.
abagxeki abaningi bakholelwa ukuthi amanye ama-movie ne Sofi Loren zembula ngokugcwele kakhulu wakhe njengoba actress okukhulu. Lezi zihlanganisa :. "Chochara", "Umshado isiNtaliyane," "Izolo, Namuhla Nangomuso" futhi "Sunflowers"
IBamba unekhono ifilimu "Chochara" bamangala ngisho ebona Hollywood baxgeki. Ukunemba yesehlakalo movie lapho Sofia odlale isisulu udlame, ungashiyi kubo ngabandayo. Umsebenzi wakhe uye efakiwe brilliant Academy Award. Ngemva kwalesi senzakalo, ukuqala ukuthola okunikezwayo okuvela Hollywood cinema okuyinhloko, futhi ezikrinini we ifilimu wokuqala nge Sofi Loren, ezithathwe imboni amaphupho iqhaza elibonakalayo ifilimu izinkanyezi.
"Ukuziqhenya futhi Passion"
Esikhathini ifilimu "Ukuziqhenya futhi Passion" nabalingani bayo ngibe usaziwayo Cary Nika futhi Frank Sinatra. Le filimu liyakhuluma ngokuphela kwempi e 1810, lapho Napoleon yanqoba emazweni amaningana eYurophu. abashokobezi Spanish ngokuphuthumayo belwela inkululeko yokuzimela. Nobuhle Juana ngu Sofi Loren is abatelekile ukuchwensa yayo futhi elikhangayo. Futhi-ke, ubulungisa buyoba buningi khona. Nakuba nge ngemihlatshelo emikhulu. Namuhla izethameli ukholelwa ifilimu kancane ukuzikhohlisa, kodwa ngisho ngenxa ukudlala actress enhle, kuwufanele look.
Ukuthunjwa engaphezu kwekhulu imidwebo obonisa Sofi Loren. Uhlu amabhayisikobho engcono ngeke unike ukuthi umuzwa obuzwiwa umbukeli, waphinda kokuhlaziya izithombe lapho umdlali odlala. ubuhle kanye nekulingisa wakhe ithalente yanqoba hhayi kuphela izinhliziyo izigidi zabantu bathuthumele ngisho umphefumulo olukhuni ka uMbhishobhi Omkhulu Genoa. Entela, wathi kuyinselele ibandla ngokumelene cloning, kodwa Sofi Loren kuyadingeka ukuba enze okuhlukile. Lo mlingisi has arsenal yayo eziningi imiklomelo kanye nemiklomelo.
Izikhathi eziyisishiyagalolunye yaklonyeliswa Golden Globe, umklomelo for Kuhle Umlingisikazi ngesikhathi Cannes Film Festival, Golden iNgonyama Venice Film Festival, Golden Bear at Berlin Film Festival, British Film Academy Award. Badunyiswa ngokunikwa umklomelo okhethekile ngegalelo lakhe cinema emhlabeni - a statuette nezesiliva "Saint George".
Amabhayisikobho engcono kakhulu Sofi Loren oyibamba yakhe umsebenzi wayengazange bakhishwe uyathola. Kodwa AMANOTHI Marcello Mastroianni. Igcizelela ubunye ekhethekile wemiphefumulo futhi ukufana umlingisi lokhu umlingisi oluvelele.
Ama-movie ne Sofi Loren futhi Marcello Mastroianni
"Umshado Italian" usitshela vicissitudes lothando Filomena futhi Domenico, ukhanda kabani esikhohlisayo kuletha okokuqala endaweni yezifebe, lapho Heroine osemusha ukuze baziphilise. Umhlangano elimfushane imisiwe for a lifetime. Domenico abakwazi ukuvuma imizwa yakhe, ubani ngoba Filumeniya. Akukwazi noma naye noma ngaphandle kwakhe. Ngakho-ke, sanquma ukuthatha isinyathelo yenza ngokuphelelwa yithemba. Izethameli kuqashelwe ukuthi le ifilimu akalilahlile ngokuhlathulula ukusebenza kwawo namuhla.
"Izolo, Namuhla Nangomuso." Kulesi sithombe, nabalingisi ukudlala ngamunye umlingisi ezintathu ezahlukene. Kuyinto izindaba ezintathu ngobuhlobo phakathi kwabesilisa nabesifazane ukukhombisa kwezakhi kwezenhlalo kanye ezahlukene izimo ezahlukene kanye nezinkinga ekuqondeni efanayo. Izibukeli usho izimo yamahlaya lapho amaqhawe kanye enkulu umdlalo abadlali.
"Fashion okuphezulu". Isithombe akulona uthando olungenayo lapho kungamazwi okubhuqa. It is kakhulu fake usulu emhlabeni nemfashini. Isetshenziselwa ukufeza umgomo nakanjani. Ngokuvamile izibukeli ezimi ukumaka amahlaya ezicashile bese uhlela umdlalo kakhulu we duo abadumile Sofi Loren futhi Marcello Mastroianni.
"Sunflowers". Lena indaba okukhulu mayelana uthando Antonio Giovanna. Ukuthuthukiswa uthando lwabo indaba iphazanyiswe empini, umlingiswa oyinhloko ithunyelwa phambi isiRashiya, futhi, njengoba kwenzeka ngo-impi, ulahlekelwa. Joanna uyehluleka ukuthola lover. Lapho zonke izinketho isiphelile, usafunda beyofuna Antonio eRussia. Uphenyo ifilimu omuhle, indaba okukhulu kwenza uzibuze.
kukhona ama-movie Sofi Loren, "Kubhaliwe ukuthi indlu yami igcwele izibuko" Ukuze umsebenzi wokugcina usuku, "Nine", "neyaziwayo Europe", "upelepele Stuffed ungene ebhizinisini."
Umdwebo "Indlu yami igcwele izibuko" ikakhulukazi ayithandayo actress. Ngoba ngokuphila kwakhe futhi utshela indaba ngohambo lakhe nzima endleleni eya enkazimulweni, kanye nobunzima umama, udadewabo actress babhekana.
Manje uyazi ukuthi ubani lo Sofi Loren, Filmography, uhlu engcono isilomo amabhayisikobho okusesihlokweni esithi.
Mayelana 'iPhone' ukusula imemori: amathiphu